Afrika Avaratra: Fijirihana sy Famotehana tranonkalan’ireo antoko politika mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2018 7:17 GMT
Mihalasa lasibatra manokan'ireo mpijirika (jiolahy informatika) ny tranonkalan'ny mpanohitra ao amin'ireo firenena any Afrika Avaratra, indrindra ao Tiorkia, Libia, sy Maoritania. Tao Tonizia no nahitana voalohany ity tranga vaovao ity – atao tsy azo idirana ireo tranonkalan'ny mpanohitra sy ny mpitsipaka – izay farafahakeliny tranonkala sy blaogy 14 no lasibatra teo anelanelan'ny 2007 sy 2008, ary toa miparitaka ao amin'ny faritra mba hikasana ny hamefy ny fahalalahana maneho hevitra anatiny na ivelan'ny tambajotra. (amin'ny teny anglisy na arabo ireo tranonkala sy blaogy voatanisa)
Ao Tonizia, nantsoin'ny mpampanoa lalàna i Rtoa Naziha Rejiba, mpiara-miombon'antoka an-tambajotra amin'i kalima, Filoha lefitry ny Fanarahamaso ny fahalalahan'ny gazety, ny fanontàna ary ny famoronana (OLPEC), taorian'ny niampangany ireo manampahefana toniziana ho ao ambadiky ny famotehana ny tranonkalan'i Kalima tamin'ny Oktobra 2008.
Tao anatina fanambarana fanoherana, niampanga ireo manam-pahefana libiana ho mikarakara fanafihana an-tambajotra ihany koa ny Ligy Libiana ho an'ny Zon'Olombelona (LLHR) sy ny Libya Human and Political Development Forum (Sehatra firesahana ny famandrosoana ny maha-olona sy ny politika) [amin'ny teny arabo].
Ao Maoritania, raha toa ka niampanga ireo antoko politika nasionaly sy vahiny ho nanelingelina azy ny tranonkala Sahara Media, heverina ho toy ny tranonkalam-baovao voalohany ao amin'ny firenena, milaza kosa i Sheikh Ould Ahmad Amin, toniandahatsoratra ao amin'ilay tranonkala fa « misy ifandraisany, na mivantana na tsia, amin'ny zava-nitranga ny fitondrana miaramila ankehitriny izay nanongana ny fanjakana maoritania sambany lany tamin'ny fifidianana. »
Araka ny fanambarana tamin'ny 19 janoary 2009, voatafika na nosimbaina tamin'ny Janoary 2009 ny tranonkala enina an'ny mpanohitra. Nosimbain'ireo mpijirika avokoa ny votoatin'ny dimy tamin'ireo tranonkala ary nosoloiny tamin'ny votoaty an’ny Algathafi , tranonkala manokana natao ho an'ny fieritreretana sy ny fomba fijerin'ny filoha libiana Mouammar al- kaddafi.
Mbola tsy afaka idirana foana ny dimy tamin'ireo tranonkala enina voatafika :
Araka ny tranonkala Hack In The Box, farafahakeliny tranonkala maoritania roa be mpanjohy no voatafika tamin'ny Novambra 2008. Samy manana fihetsika mitsikera ny tafika mpanongam-panjakana tarihan'ny Jeneraly Mohamed Ould Abdel Aziz izy roa ireo.
Nakatona nandritra ny andro iray na roa ny tranonkalan'ny Sahara Media, ilay Sampan'orinasam-baovao , heverina ho toy ny tranonkala maoritania voalohany, raha toa ka tsy vitan'ny voajirika fotsiny ilay tranonkala Anbaa fa nosimbàna ny toeram-piasany ary nangalarina ireo solosainany, manamarina izany i Atoa Maloum, mpandrindra ny tranonkala For Mauritania, mpikambana ao aminà vondrona mpanao tsindry.
Toa mifandray amin'ny fikasany hizara vaovao momba ny tantara ratsy maha-voarohirohy ireo mpanao politika sy manampahefana ambony ao amin'ny asam-panjakana ao amin'ny firenena ny fijirihana ny tranonkala Anbaa.
Toy ny voatatitra tao anatina lahatsoratra teo aloha avy amin'ny Global Voices Advocacy, efa saika lasibatry ny fanafihana in-dray na in-droa avokoa ny tranonkala rehetra an'ny mpanohitra ao Tonizia na ny blaogy manokan'ireo mpikatroka aza. Raha ny fahitana ny fisesin'ireo fanafihana ireo, ary koa ny natioran'ireo tranonkala sy blaogy lasibatra amin'izany, takatr'ireo toniziana mpitarika ny fanoherana sy ireo mpiaro ny Zon'Olombelona fa ny fanjakana ihany no mikarakara ireo fanafihana an-tambajotra ireo. « Tsy esorika anatin'izany ny mety ho nanaovan'ny sampandraharaha miafina ity hetsika ity, miaraka amin'ny fanampiana mpijirika na jiolahy monina ao Tonizia na any ivelany, », izany no fijerin'ny lehiben'ny toniandahatsoratra ao amin'ny Kalima, i Sihem Bensedrine. Ito ny lisitra tsy feno an'ireo tranonkala sy blaogy voatafika teo anelanelan'ny 6 Jolay 2007 sy 5 Novambre 2008 :